Carruurnimada waxaa ka buuxa guulo farabadan oo la gaaro!
Carruurtu siyaabo aad u farabadan ayay u koraan oo ay isku beddelaan. Laga bilaabo dhalashada, waxuu ilmahaagu marxalado ka gaari doonaa sida uu u ciyaaro, wax u barto, u dhaqmo una hadlo. Tusaalooyinka marxaladaha la gaaro waxaa ka mid ah tallaabada ugu horraysa socodka, ilkacaddaynta, gacanta oo loo lulo “bye bye” ama salaama ama gacanta oo loo fidiyo shay carruurtu ku ciyaarto. Marxaladaha la gaaro way u kaladuwan yihiin qayb da' kaste. Baro aasaasyada horumarka carruurta si aad ula shaqayn karto ilmahaaga oo aad u hubin karto in uu jidka toosan ku jiro.
Wax dheeraad ah ka baro marxaladaha horumarka ee da'da u kala baxsan adigoo isticmaalaya agabkan ama qalabkan lala macaamilo ama lala shaqeeyo ee loogu talagalay waalidiinta
Tijaabi Abb-ka ama barnaamijka telefoonka gacanta ee Milestone Tracker
(Raadraacaha Marxaladaha) ee BILAASH ah
Marxaladaha la gaaro waa muhiim! Horumarka hore ee ilmahaaga ayaad si fudud ugula socon kartaa uguna xusi kartaa Abb-ka Milestone Tracker ee barnaamijka “Learn the Signs. Act Early.” (Calaamadaha Baro. Tallaabo Hore u Qaad.) ee xarunta CDCLa soco ama raadraac marxaladaha uu ilmahaagu ka gaaro xilliyada horumarka muhiim u ah laga bilaabo 2 bilood ilaa 5 sano adigoo isticmaalaya liisaska hubinta sawirro leh ee isticmaal fudud. Weliba, fikrado ka hel sida aad u dhiirrigelinayso horumarka ilmahaaga oo soo ogow waxa aad samaynayso haddii aad ka walaac qabto sida uu ilmahaagu u horumarayo ama u kobcayo. Sawirrada iyo fiidiyowyada ku jira abb-kan ayaa sawiraya ama muujinaya marxalad kaste waxayna kuu fududaynayaan oo ay xiise kuugu yeelayaan in aad kuwaas ilmahaaga ugula socoto.
Su'aalo Ma Ka Qabtaa Horumarka Ilmahaaga?
Carruurtu noloshooda oo dhan ayay koraan, horumaraan oo ay wax bartaan - dhanka bulsheed iyo shucuureed, dhanka garaadka iyo jirka. Ilme kaste kuwa kale wuu ka duwan yahay waxuuna ku horumaraa xawaare ama tallaabo gaar u ah. Haddana, waxaa jira xirfado muhiim ah oo ay carruurtu u baahan yihiin si ay ugu guulaysan karaan dugsiga iyo bulshadooda. Waxaad hubin kartaa in ilmahaagu uu xirfadahan leeyahay marka aad marxaladaha u yaalla fiiriso waqti hore iyo marar badan. Haddii aad marnaba ka walaac qabto horumarka ilmahaaga, ka hadal! Adiga ayaa sida ugu fiican u garanaya ilmahaaga.
Wac Khadka macluumaadka barnaamijka Help Me Grow ee Washington ee ah 1-800-322-2588 si aad u ogaato tallaabooyinka aad maanta qaadi karto si aad ilmahaaga uga caawiso in uu gaaro kartidiisa buuxda.
Booqo barta ParentHelp123 si aad u Hesho Gargaarka Helitaanka Khayraadka ama adeegyada
ParentHelp123.org waxaa hawlgelisa hay'adda WithinReach waxaana lagu caawiyaa qoysaska Gobolka Washington in ay adeegyo ka helaan bulshooyinkooda, ay eegaan haddii ay u qalmaan dheefaha cuntada iyo caafimaadka, oo ay la xiriiraan khayraad kaladuwan oo ku lug leh caafimaadka iyo horumarka carruurta. Barta internetka waxaa weliba lagu bixiyaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka oo loogu talagalay haweenka uurka leh, carruurta iyo qoysaska.
Ku Bilow barnaamijka Vroom
Bulshooyinka ku baahsan gobolka Washington iyo waddanku waxay isticmaalaan barnaamijka Vroom si ay horumarka maskaxda carruurta ugu kordhiyaan hab xiise u leh oo u fudud in uu qof kaste sameeyo. Diyaar ma u tahay in aad fikradaha ku jira barnaamijka Vroom qaarkood ku tijaabiso ilmaha ama carruurta ka mid ah noloshaada? Booqo barta internetka barnaamijka Vroom si aad u ogaato halka aad ka heli karto Abb-ka Vroom ama fikrado la daabacan karo lana soo dejisan karo. Si aad u hesho war dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka Vroom ee Washington, fadlan fiiri hal boglahan..
Marxaladaha la gaaro ka eeg waqtiyada maalin walba! Waxaan annagu ku deeqnaa baaris bilaash ah si aan waalidiinta iyo daryeeleyaasha uga caawinno hubinta ama fiirinta horusocodka horumarka ilmaha.